About: Kyle Jarvis
Kyle Malcolm Jarvis (born 16 February 1989) is a Zimbabwean cricketer who plays for Lancashire and formerly represented Zimbabwe. The son of another former Zimbabwean international cricketer Malcolm Jarvis, he was educated at St Johns College, Harare, where he excelled at rugby and cricket. Kyle was a key bowler for Zimbabwe in the 2008 Under-19 World Cup and he also played for the Zimbabwe U-19 Rugby Team.
Kyle Malcolm Jarvis (born 16 February 1989) is a Zimbabwean cricketer who plays for Lancashire and formerly represented Zimbabwe. The son of another former Zimbabwean international cricketer Malcolm Jarvis, he was educated at St Johns College, Harare, where he excelled at rugby and cricket. Kyle was a key bowler for Zimbabwe in the 2008 Under-19 World Cup and he also played for the Zimbabwe U-19 Rugby Team. (en)
Kyle Jarvis (en)
Kyle Malcolm Jarvis (en)